Ngubani Ubambelele "Ngubani Ofuna Ukuba Yizigidi?"
Ukususela kwiRegis Philbin ukuya kuChris Harrison
Ubani ofuna ukuba yi-Millionaire yaqala njengenkqubo ye-prime-time yokuphumla ngo-1999, ukuvula indlela yokwenza iimveliso ezininzi ezinobungakanani, ezinkulu phambi kobudlelwane balo ngo-2002. Lo mboniso unomdla wabantu abathintelayo abaphendule uluhlu lwemibuzo eyanzima kakhulu imali engaphezulu baze baphendule umbuzo wokugqibela we-dollar. Ukuba baphendula ngokuchanekileyo, mhlawumbi ngoncedo linye yezinto ezintathu zokuphila, baya kuzuza i-check for $ 1,000,000.
Nangona kunjalo, uvuyo lokwenene lobuboniso luvela ekusebenzisaneni nganye kwintlanganiso yeenkalo kunye neendwendwe zayo. Kwaye ngoxa iWWTBAM iphakanyisiwe kwaye iphantsi ekuthandweni kubeni okokuqala yenza i-splash enkulu, ibone imithombo yamacandelo ehlukeneyo endleleni eya phefumula ubomi obutsha kwimbonakaliso eneminyaka eli-17 ubudala.
Amaqhawe aqhelekileyo athi "Ngubani ofuna ukuba nguMillionaire " unokuthiwa ngamagama omkhosi owaziwayo, kodwa ngaba uyazi ukuba kukho imikhosi emine ngoku? Nabo bonke abanobuntu abaye babamba umboniso, ukususela ekuqaleni ukuya kutshanje.
iCallcrest Productions Ltd.
" Ngubani ofuna ukuba nguMillionaire " eguqulelwe kwifomathi yaseBrithani igama elifanayo kunye neyokuqala (kwaye ngokuqinisekileyo yaziwa) yenguqu ye-US nguRegis Philbin . URisis wayeyindoda epheleleyo yomsebenzi, kunye nobungqina bakhe kunye nokukwazi ukubeka abadlali kumbono ngexesha bebathuthuzela ngeengcinezelo zokuphendula imibuzo enzima.
"IMillionaire" yaqala ngokubaluleka kwixesha eliqaqambileyo kwi-ABC ukususela ngo-1999 ukuya ku-2002, equkethe iRegis njengomncedisi wokuqala. Nangona kunjalo, ngo-2002 lo mboniso uhanjiswe kwi-union syndication kunye neziqendu ezintlanu ngeveki kwaye umphathi omtsha wayebizwa ngokuba ngumqhubi wenkqubo.
UMeredith Vieira (2002-2013)
Ukutshisa kwizithende zeempumelelo zikaRegis kunye nenkqubo, uMeredith Vieira waba ngumkhosi wesibini othi "Ubani Ofuna Ukuba Yi-Millionaire" ngo-2002. Akazange athathwe ngokukhawuleza njengoko abanye ababukeli babenenkathazo yokwenza utshintsho ekuboneni iRegis kule indima. Ababukeli abaninzi bamthanda, nangona kunjalo, kwaye wagqiba ukuphumelela ama-Emmy Awards ama-Daytime ngomsebenzi wakhe kumdlalo wezemidlalo.
U-Vieira wayengumgcini womhlaba wabasetyhini njengemikhosi yemidlalo yemidlalo, ejongene ne-quiz quizzer enomdla kunye neshushu. Washiya umboniso ngo-2013 emva kweentsuku ezilishumi elinesibhozo njengommkeli.
I-Cedric "I-Entertainer" Kyles (2013-2014)
Emva kokumemezela kukaViira ukuba uya kushiya umbukiso, ukucatshulwa kwabaleka malunga nabani ababeza kuthatha uxanduva lokusingatha. Abaninzi bamangaliswa xa befumanisa ukuba i-hosted entsha yexesha le-2013-14 yayiza kuba ngumhlekisi uCedric uMngenisi.
I-Cedric yaphela yahlula ababukeli, abaninzi banomdla kunye nabanye abaninzi abangenakuzisebenzisa ngendlela yakhe. Ekupheleni konyaka, lo mboniso wachaza ukuba uya kusuka eNew York City ukuya eConnecticut. I-Cedric yagqiba ekubeni ingahambi nabo.
i-Disney-ABC yasekhaya yaseTV
Emva kwayo yonke ingcamango eyenzekayo xa i-Vieira ishiye umbukiso, abalandeli abazange balinde ixesha elide ukufumanisa ukuba ngubani oza kuthatha umboniso emva kokuhamba kweCedric the Entertainer. Emva kweentsuku emva kokumenyezelwa kwakhe, "Ngubani Ofuna Ukuba Yi-Millioneire " wasayina umkhosi wakhe olandelayo: Terry Crews.
I-Crews ngumdlali wangaphambili we-NFL kunye nomdlali wamanje, oye wabonwa kumabhayisikobho nakwimabonwakude, ngoku kutshanje kwi-Fox "eBrooklyn Nine-Nine," umboniso malunga neBrooklyn yamaPhoyisa aseProtekthi angama-99 apho uTerry edlala khona umphathi wamapolisa. Ukudlala inxalenye yomdlalo wemidlalo yemidlalo kwakuyinto entsha yokuqalisa kwakhe, kodwa wahlala kuphela kulo mboniso ngexesha elilodwa, eshiya ukujoyina i-"Nine Nine Nine".
UChris Harrison (u-2015 - ngoku)
Ngaphambi kokumemezela ngokusemthethweni ngo-2015, uChris Harrison wayesele edume ngokubamba iqela eliyimpumelelo ye-reality show "I-Bachelor" kunye nayo yonke i-spin-offs yayo. I-Harrison ithatha ixesha le-14 lemiboniso kwaye ibe yindwendwe ebambileyo ukususela ngoku, ukulungisa isethi entsha yokuthandwa kwenkqubo.
Umboniso unqande ukukhanselwa emva kokulinganisa okubi kwixesha le-2014-2015. Ngethamsanqa, iHarrison yajika ingxaki. Umboniso uhlaziywe ngethuba lonyaka we-2018, kwaye iHarrison isayinwe ukuba ihambele ubuncinane loo nto.
Ubonisa Ukuphosa, okanye Ukunyuka?
Ukususela ekuqaleni kwayo ngo-1999, Ofuna Ukuba Yi-Millionaire kuye kwaba uhlobo oluthile lokulinganisa i-coaster coaster. Ngethuba liqalise nge-bang, ukulinganisa kwaqala ukucima ngexesha eliphambili ngo-2002. Ngobudlelwane, lo mboniso waqala ngamandla waza waqala ukuphela. Ngoku ukuba sibona inkcitho enkulu kwimisebenzi yokusingatha, kunzima ukuxelela ukuba umboniso uya kuhla okanye ukuba uya kuvuya ngokutsha kwakhona. Nangona kunjalo, ngefomathi yayo eqinile (nangona emva kweenguqu ezininzi) kunye nembali, ndiqinisekile ukuba "Ngubani ofuna ukuba nguMillionaire" uphinde uhambe ngendlela eya phezulu. Ngoko, hlalani kwaye nihlale nibukele - ububukeli bubeka ixesha elide.
Iimpawu ezithandathu zeNkqantokazi yaseMdeni Bonisa amaHonga
Isilinganiso semigangatho ye-GRE yezikolo eziphezulu eziphezulu
Laos | Iinkcukacha kunye neMbali
Funda ukuthetha okulungileyo ekuseni (ohayou) ngesiJapan
Amanqaku ezendalo, iimpawu zeNdalo kunye neengozi eMculo
I-Glossary epheleleyo yeeKholeji zamaGrike eziGrike